नेपाल आज | आक्रमक अख्तियार : घुसकाण्डमा को–को परे ?
आक्रमक अख्तियार : घुसकाण्डमा को–को परे ?
यो घटना इतिहासकै नौलो थियो । यता अख्तियारकै प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म अधिकारी पनि १ लाख घुससहित समातिए । अधिकारीविरुद्ध अदालतमा घुस मुद्दा दायर भयो। अख्तियारभित्रकै पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचार तथा घुसमा मुछिए पनि यो वर्ष अख्तियारको सक्रियता निकै बढ्यो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो।